Yimaphi amabhishi amahle kakhulu e-Italy? | Amadoda aSitayela
Yimaphi amabhishi amahle kakhulu e-Italy?
UFausto Ramirez | | Indlela yokuphila, Ukuzilibazisa
Italia Yizwe okuthi, ngaphezu kokwaziwa ngobuhle obukhulu bamadolobha nezikhumbuzo zalo, linamabhishi amaningi amahle avakashelwe izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba, ikakhulukazi ehlobo. Ugu lwase-Italy lunamakhilomitha ayizinkulungwane zamabhishi amahle anezindawo ezihlukahlukene. Namuhla sethula ukukhethwa kokuhle kakhulu amabhishi kusuka e-Italy, ukuze ukwazi ukuthola izimfihlo zayo futhi ujabulele iholide elingenakulibaleka eligcwele isimanga nokuzidela.
U-Isola dei Conigli Kulu lolwandle lonogwaja futhi kungenye yamabhishi amahle kakhulu eningizimu ye Lampedusa, isiqhingi esikhulu kunazo zonke eziqhingini zasePelagias, oLwandle iMedithera. Lesi siqhingi sihlukaniswa ubuhle obukhulu bendawo yaso engonakalisiwe kanye naso amanzi oluluhlaza futhi ngekristalu. Ubumsulwa bayo buyenza ibhekwe njengendawo yokugcina yemvelo nendawo engavamile ngaphakathi kwe- IMedithera, lapho ufudu lwasolwandle luzobekela khona amaqanda alo. I- i-playa I-de los onogwaja ibhekwa njengamabhishi amahle kakhulu ayi-10 emhlabeni.
Enyakatho ye- Sicilia sithole idolobha elincane elisogwini, I-Saint Vitus Clapho, esibe yindawo ebalulekile yezivakashi ngoba inelinye lamabhishi amahle kakhulu esiqhingini. Njengoba kunesihlabathi esihle esimhlophe, lolu lwandle lukulungele ukuzijwayeza imidlalo yezamanzi efana windsurf, ukuhamba ngomkhumbi, ukudilika emanzini, ukudoba. Uma usukhona ungacabanga ngamasimu esiqiwi semvelo uLo Zíngaro futhi MNgaphezulu Cofano, ngaphezu kokuhamba emigwaqweni emincane nemithi yesundu, izindlu nezakhiwo ngokwazo sifiso.
En UStintino, idolobha labadobi namatilosi aseSardinia, ulwandle lwase La Izinwele, ithathwa njengamanzi adume kakhulu e-Italy. Amanzi acwebile e-Crystal, isihlabathi esimhlophe, nokubukwa okumangalisayo kwe-panoramic ngezinye zezinto ezenza le ndawo ibe yindawo ekhangayo. Vuliwe ehlobo izivakashi zingajabulela amathuba amaningi we ukuzilibazisa, futhi idolobha linikeza imicimbi eminingi yamasiko efana nemikhosi ye umculo, imibukiso, imizila yemvelo nemincintiswano yezemidlalo yamanzi. Nawa amahhotela ahamba phambili ku ISardinia.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Indlela yokuphila » Ukuzilibazisa » Yimaphi amabhishi amahle kakhulu e-Italy?
Lungisa izinwele nge-hairspray noma i-gel?
Amasongo entambo, kunini lapho kuningi kakhulu?